कम्युनिष्ट मेयर विद्यासुन्दर शाक्य माथि अख्तियारको छानविन, महानगरमा खैलाबैला ! | Taja OnlineKhabar
कम्युनिष्ट मेयर विद्यासुन्दर शाक्य माथि अख्तियारको छानविन, महानगरमा खैलाबैला !
काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर सञ्चालनमा ल्याएको स्मार्ट पार्किङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको भन्दै लिखित उजुरी परेपछि छानबिन शुरु भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
श्रोतका अनुसार गत साउनमा नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । पहिलो उजुरीबारे त्यति वास्ता नगरेको अख्तियारले दशैंपछि सोही विषयमा दोस्रो उजुरी परेपछि छानविन थालेको हो । अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्मार्ट पार्किङ र विज्ञापन बोर्डको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू महानगरसँग माग गरिएको छ ।
महानगरले ह्विल्स ट्रली योर्स प्रालिसँगको सहकार्यमा न्युरोडको रामेश्वर मिठाई पछाडिको भाग, बिशाल बजार अगाडि इन्द्रचोक जाने सडक, धर्मपथ, पाको न्यूरोड र आरबी कम्प्लेक्स अगाडिको स्थानमा स्मार्ट पार्किङ शुरु गरेको छ । न्युरोडपछि महानगरपालिकाले दरबारमार्गमा पनि स्मार्ट पार्किङ शुरु गरिसकेको छ ।
महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ ब्रुमरको खरिद प्रक्रियाबारे पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ब्रुमर खरिदको प्रक्रिया र मूल्य शंकास्पद देखिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
ब्रुमरका विषयमा पनि गत साउनमै उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि अख्तियारले महानगरलाई साउन २८ गते पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र ब्रुमर खरिदबारे तथ्यसहित प्रतिक्रिया माग गरेको थियो । उक्त प्रतिक्रिया चित्त नबुझेपछि अख्तियारले गत १९ गते सम्पूर्ण कागजात माग गर्‍यो । ब्रुमर किन्दा मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आंशका अख्तियारले गरेको छ । गत चैतमा झण्डै ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर महानगरपालिकाले ५ वटा ब्रुमर ल्याएको थियो ।
गुण्डागर्दीमा उत्रियो ओली सरकार, सत्याग्रही गोविन्द केसीलाई पुलिस लगाएर घिसारेर लग्यो
महत्व नबुझेर केही विद्वानले बेसारको मजाक उडाएः प्रधानमन्त्री
को-रोना | उपचारमा अर्को खुशीको खबर – सम्भावित गेम च्यान्जर बन्न सक्छ …